10 Travel Mejọọ I Kwesịrị Zere Na Europe | Save A Train
Home > Travel Europe > 10 Travel Mejọọ I Kwesịrị Zere Na Europe
Oge Ọgụgụ: 7 nkeji(Emelitere ikpeazụ On: 13/11/2020)
Ọ bụrụ na ị na-eme atụmatụ njem mbụ gị na Europe, enwere ihe ole na ole ị kwesịrị ịma maka kachasị mara mma n'obodo n'ụwa. anyị mere ndị zuru okè ndu nke 10 emehie njem ị kwesịrị izere na Europe. A njem na ala nke castles, nri mara mma, ogige mba, na ime obodo, nwere ike ịbụ otu n'ime ezumike kachasị echefu ị ga-enwe. Na ntụle, o nwekwara ike gbanwee na akụkọ ojoo ma nwee ngwụcha ọjọọ, ma ọ bụrụ na ị kwadoghị nke ọma.
Ma ị na-eme njem na Europe na nke mbụ ma ọ bụ na-abịa azụ, ndụmọdụ ndị a ga-eme ka njem gị dị nchebe, nke kachasị mma, na maa epic.
1. Gaghi eleta obere obodo na ebe ana adighi-egwu
Ọ bụrụ na ọ bụ njem mbụ gị na Europe, mgbe ahu i ghaghi iga ebe ndi obula na ekwu. Otú ọ dị, ọ bụrụ na ịchọrọ ịchọta Europe pụrụ iche, then not visiting small villages and known cities are one of the travel mistakes to avoid in Europe. You should plan your trip to the most unforgettable off the beaten path places in Europe.
N'ezie, ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịhụ ma nwee otu eserese ahụ dị ka nde ndị njem ndị ọzọ na-ejupụta n'okporo ámá Paris, Milan, na Prague, mgbe ahụ soro ìgwè mmadụ. ma, ọ bụrụ na ị nwere mkpụrụ obi nke onye nyocha, na-achọ ndị zoro ezo bara nnukwu uru, mgbe mee atụmatụ njem gị obere obodo na puru iche na Europe.
2. Travel Mejọọ I Kwesịrị Zere Na Europe: Ejila Transportgbọ njem Ọha
Otu n’ime ihe mbụ batara gị n’obi ma ị nụ njem ọha na eze, bọs jupụtara na ụgbọ ala na-ekpo ọkụ, kwụ n'ahịrị, na okporo ụzọ. Otú ọ dị, ụgbọ njem ọha na Europe abụghị naanị bọs ma trams na ụgbọ oloko. Fọdụ ndị njem nleta ga-ahọrọ ịgbazite ụgbọ ala, mgbe ahụ gawa, ma njem ọha na eze na Europe dị ezigbo mma, n'oge, ọnụ ala, ma kwadoro.
Nwere ike mfe iru ndị kasị dịpụrụ adịpụ akụkụ nke Europe, ọdịdị dị ịtụnanya na-echekwa, castles, na breathtaking echiche, ụgbọ okporo ígwè. E nweghị ụzọ ka mma isi njem gburugburu Europe karịa ụgbọ okporo ígwè, ọ bụ oge zuru oke na nchekwa ego.
3. Getghara Inweta njem njem
Ee, European obodo bụ otu n'ime obodo ndị mepere emepe ma nwee nchebe na ụwa. ma, ị ka bụ mmadụ, na ọnụ ọnụ ugwu ndị dị na ogige ntụrụndụ mba Europe dị elu ma na-enweghị obi ebere. Ọ bụ ezie na ị nwere ike ịbụ onye njem kachasị njem na onye njem, ị ka nwere ike ijide oyi, kpalie nkwonkwo ụkwụ, ma ọ bụ zuru igwefoto gị.
Insurance mkpuchi na Europe dị mkpa maka ahụike na njem ndị ọzọ. Inweta mkpuchi njem na Europe bụ kwesịrị, i kwesịghị ichekwa na mkpa dị otú ahụ. Gettinggaghị enweta njem mkpuchi bụ mmejọ ị kwesịrị izere mgbe ị na-aga Europe n'ihi na ọ ga-efu gị obere akụ.
Marseilles na Lyon Zụọ Ahịa
Paris na Lyon Zụọ Ahịa
Lyon na Paris Train Ahịa
Lyon ka Avignon Zụọ Ahịa
4. Travel Mejọọ I Kwesịrị Zere Na Europe: Buzụchabeghị Tiketi Na Ọganihu
Europe dị oke ọnụ. Ọbụna ma ọ bụrụ na ị na-eme njem gaa ebe kachasị ọnụ ala, ụlọ ngosi ihe mgbe ochie na tiketi tiketi ga-efu gị obere akụ. Ọ bụghị ịzụ tiketi n'ọdịnihu bụ otu n'ime ndị kasị emehie izere na Europe, ọtụtụ nde ndị njem nleta na-eleta Europe kwa afọ, ga-ekwe gị nkwa nke ahụ.
Ya mere, ị nwere ike ịchọta azụmahịa dị ukwuu maka saịtị akara ngosi Europe, nkiri, na-eme ihe, ma ọ bụrụ na ị na-eme nchoputa na akwụkwọ tupu. Mgbe ụfọdụ ị nwere ike nweta ezigbo azụmaahịa naanị site na ịzụta tiketi n'ịntanetị, na ọ na-azọpụta gị nke ukwuu dị oké ọnụ ahịa oge na njem gị. Na mgbakwunye, ọ bụrụ na ọ bụ njem mbụ gị na Europe, ị kwesịrị ị na-akwadebe maka ogologo queues. Ya mere, ịzụta tiketi na tiketi dị n'ịntanetị ga-azọpụta gị iguzo na mmiri ozuzo, na-ekpo ọkụ n'oge okpomọkụ ụbọchị, ma hapụ gị oge maka nke ahụ echiche na picnic.
5. Gbanwe Ego n’ọdụ ụgbọ elu
Ga mba ọzọ nwere ike ịna-agwụ gị ike, ịgaghị asụ asụsụ ahụ ma ọ bụ chọta ụzọ ị ga-esi gazuo obodo ahụ. Ijikwa mmefu ego gị na ego mba ofesi nwekwara ike ịna-enye gị nsogbu. Ọ bụ ezie na ịgbanwere ego na ọdụ ụgbọ elu dị mma ma nwee ntụkwasị obi, ọ bụ otu n'ime mmejọ njem iji zere na Europe.
Feesgwọ ị ga-akwụ kwụọ ụgwọ ma gbanwee ego ga-efu gị, ya mere ọ kachasị mma ịme nyocha gị n'ịntanetị na eisi mgbanwe. Ọzọkwa, ị nwere ike ịrịọ mgbe niile na nnabata ụlọ nkwari akụ gị, ha ga-enwe obi ụtọ ịkwado isi ego na mpaghara. A na-atụ aro ka ị gbanwee maka njem site n'ọdụ ụgbọ elu, na ego ga-ekpuchi nke mbụ 1-2 ụbọchị na njem gị.
6. Ntinye akwụkwọ Na-anabata Obodo
Ọnọdụ bụ otu n'ime ihe kachasị mkpa n'ịmepụta ihe ezumike zuru oke na Europe. Doinggaghị eme nyocha gị n'akụkụ kachasị mma nke obodo, agbata obi, ma ọ bụ obodo nta ịnọ, bụ ihie ụzọ iji zere mgbe ị na-eme njem na Europe. Họrọ ebe obibi gị dị mkpa dị ka ịhọrọ ụdị ebe obibi. Nọ n'akụkụ na-ezighi ezi nke obodo nwere ike ịme gị oge njem, okporo ụzọ, price, na nchekwa.
Brussels ka Amsterdam Zụọ Ahịa
London ka Amsterdam Zụọ Ahịa
Berlin na Amsterdam Zụọ Ahịa
Paris na Amsterdam Zụọ Ahịa
7. Travel Mejọọ I Kwesịrị Zere Na Europe: Na-eri nri na ụlọ oriri na ọ Firstụ Firstụ mbụ ị hụrụ
Ọ bụrụ na ị bụ ụdị njem nleta, mgbe ahụ ị ga-aga maka usoro nri ngwa ngwa a ma ama maka nri ehihie ma ọ bụ ụlọ nri mbụ ị na-aga. Otú ọ dị, ị nwere ike ịhapụ ụlọ nri dị ịtụnanya, na mma mpaghara efere na echiche nke ga-ewe gị ume pụọ.
Ọ bụrụ n ’inyefe nanị oge maka nyocha tupu njem gị, ị ga-emeso onwe gị ahụmịhe nri nri anaghị echefu echefu. E wezụga, ka na-anwale nri di uto, ị nwere ike ịchekwa ole na ole dimes, kama ịghagharị na ụlọ oriri na ọ firstụ firstụ mbụ. Nnukwu kọfị, achịcha dị iche iche, nri obodo, na efere dị ịtụnanya na ọnụego ọchị, nwere ike ịbụ ihe dị n'akụkụ nkuku.
Florence na Rome Zụọ Ahịa
Naples gaa Rome Zụọ Ahịa
Florence na Pisa Zụọ Ahịa
Rome ka Venice Zụọ Ahịa
8. Ickingrapara na Akwụkwọ Ntuziaka Kama Citygagharị Njegharị Na-agagharị Obodo
Akwụkwọ ntuziaka bụ ezigbo ihe mmụọ nsọ maka njem na Europe, na inwe atụmatụ njem izugbe. Otú ọ dị, ịrapagidesi ike na akwụkwọ ntuziaka gị bụ otu n’ime mmejọ njem kachasị ukwuu iji zere na Europe. Ọ pụtara na ị ga-eleta otu ebe dị ka ọtụtụ nde ndị ọzọ na-eme njem nleta, ma dị ka onye njem nleta.
Chọta obodo a n'efu na-ejegharị bụ ụzọ kasị mma na-enwe ndị kasị fabulous obodo na Europe. Onye na-asụ Bekee na-asụ Bekee ga-ebugharị gị n'obodo. Na mgbakwunye na igosi saịtị ndị ama ama, onye ndu njegharị na-eme njem n’obodo ga-agwa gị ihe nzuzo nzuzo nke obodo ahụ ma nye gị ọtụtụ ndụmọdụ na ndụmọdụ maka obodo ahụ. Nke a na-agụnye ihe oriri, nnukwu azụmahịa, ebe zoro ezo, na nke kachasị mkpa iji nọrọ na nchekwa.
AAmsterdam na London Ahịa Ahịa
Paris na London Zụọ Ahịa
Berlin na London Zụọ Ahịa
Brussels na London Zụọ Ahịa
9. Travel Mejọọ I Kwesịrị Zere Na Europe: Adịghị Mbukota N'ihi Europe
Anwụ na-acha, ezo, chilii, ma ọ bụ iru mmiri, otu n'ime ihe ndị kasị pụrụ iche ihe banyere Europe bụ na ị pụrụ inweta ihe niile 4 oge n'otu ụbọchị. Ya mere, ịghara ịkwakọba kpọmkwem maka ihu igwe Europe bụ mmeghe njem iji zere ma ụgwọ ọ bụla.
T-uwe elu, mmiri ozuzo na ifufe jaket, akpụkpọ ụkwụ dị mma bụ naanị ihe dị mkpa iji kpoo maka njem gị na Europe. Ọ kachasị mma ịkwakọ na iyi akwa, n'ụzọ dị otú a, ị ga-enwe ahụ iru ala na ihu igwe ọ bụla, ma agaghị ebugharị uwe mwụda niile.
Munich na Zurich Zụọ Ahịa
Berlin na Zurich Zụọ Ahịa
Basel na Zurich Zụọ Ahịa
Vienna na Zurich Zụọ Ahịa
10. Idebe Ego Gị n'otu Ebe
European obodo mara maka ịbụ pụtara, kamakwa maka Ntụtụ, njegharị ndị njem, na atụmatụ dị iche iche iji duhie ndị njem. Na-akwụ ụgwọ mmefu njem gị n'etiti njem gị ụbọchị akpa, mma, na kaadị akwụmụgwọ bụ ụzọ kachasị mma iji gaa njem nke ọma ma nwee ọ enjoyụ.
Ọ kachasị mma ịnọ n'akụkụ nchebe ma zere ịchekwa ego na kaadị akwụmụgwọ gị n'otu ebe. Ya mere, n'inwe ihe dị oké ọnụ ahịa nke gị n'oge niile na ebe ọ bụla, bụ ndudue njem ị kwesịrị izere na Europe.
Amsterdam na Paris Zụọ Ahịa
London na Paris Zụọ Ahịa
Rotterdam na Paris Zụọ Ahịa
Brussels na Paris Zụọ Ahịa
ikwubi, e nwere ọtụtụ ihe magburu onwe ebe na-achọpụta na Europe. Nwere ike iji oge izu ụka dị ịtụnanya ma ọ bụ mee atụmatụ njem ogologo Euro, ohere ya enweghị njedebe. ma, mgbe ị na-eme njem gaa mba ọzọ, iwu nke egwuregwu a na-adị iche n’obodo dị n’obodo. Naanị ihe na-adị otu bụ mmejọ ndị njem nleta na-eme njem ọ bụla. Anyị 10 emehie njem iji zere na Europe, ga-echebe gị ma mee njem gị pụrụ iche.
ebe a na Save A Train, anyị ga-enwe obi ụtọ inyere gị aka atụmatụ gị ezumike Europe ị họọrọ ụgbọ okporo ígwè.
You chọrọ Embed anyị blog post “10 Travel Mejọọ I Kwesịrị izere Na Europe” jidesie gị na saịtị? Ị nwere ike ma na-ewe anyị foto na ederede na-enye anyị n'aka na a njikọ a blog post. Ma ọ bụ pịa ebe a: https://embed.ly/code?url =Https://www.saveatrain.com/blog/travel-mistakes-avoid-europe/ የሰማይ አካላት- (Pịgharịa gaa na ala a obere ịhụ Embed Usoro)
Ọ bụrụ na ị chọrọ inwe obiọma ọrụ gị, i nwere ike na-eduzi ha kpọmkwem n'ime anyị search peeji nke. A njikọ, you will find our most popular train routes – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml.
Inside ị anyị njikọ maka English ọdịda ibe, ma anyị nwekwara https://www.saveatrain.com/pl_routes_sitemap.xml, na ị nwere ike ịgbanwe / pl ka / tr ma ọ bụ / de na ọtụtụ asụsụ.